I-Global Aerospace Interior Sandwich Panel Market Okungase Kukhule Ku-5.5% CAGR Ngesikhathi sika-2017 kuya ku-2022 kanye ne-Industry News-Suzhou Beecore Honeycomb Equipment Co, Ltd
I-Global Aerospace Interior Sandwich Panel Market kungenzeka ikhule ku-5.5% CAGR Ngo-2017 kuya ku-2022 kanye
Isikhathi: 2019-09-01 Ukushaya: 20
Interior Sandwich Panel Market Emkhakheni we-Global Aerospace: Okuvelele
Ngokucwaninga kweStratview, imakethe yamasandwich engaphakathi eningizimu yezwekazi inikezela ithuba lokukhula elinempilo lika-5.5% CAGR ngesikhathi sokubikezela sika-2017 kuya ku-2022 futhi ifinyelela imali elinganiselwa ezigidigidini ezingama-1.6 ngonyaka ka-2022. Umbhali walo mbiko wathi Ukhuphula amanani wokukhiqiza we indiza ebalulekile yezentengiso neyesifunda, njenge-B737, B787, A320, A350XWB, kanye neC C Series; izindiza ezizayo zezentengiso nezesifunda, njengeComac C919 neMitsubishi MRJ; isidingo esikhulayo semikhiqizo engasindi futhi iqinile kuzinhlelo zokusebenza zangaphakathi ezithuthukiswa ukwethulwa kwemithetho kahulumeni eqinile ehambelana nokusetshenziswa kukaphethiloli kanye nokwehliswa kokuphuma; intuthuko kwezobuchwepheshe; ukwanda ngosayizi wemikhumbi yezindiza zomhlaba; nokuqwashisa okukhulayo ukuthuthukisa isipiliyoni sabagibeli yikhona okushisekela ukukhula kwemakethe.
Ngokuya ngohlobo oluyisiqalo sezinto ezibonakalayo, uju lwezinyosi ze-nomex bekulokhu kungukukhetha okungapheli kohlu olubanzi lwezicelo ezingaphakathi embonini yezindiza. Zonke izinhlobo ezinkulu zezindiza ezibandakanya izindiza ezinomzimba omncane nezindiza eziningi zincike kakhulu kulokhu kwaziswa okuhlukile. Izinyosi zezinyosi zaseNomex zinikeza izinzuzo eziningi zezinto zokuncintisana ezifana nesisindo, ukuqina nokuqina okuqinile, ukumelana okuhle kokugqwala, ukumelana nomlilo okuhle, ukuzinza okuhle kwamafutha, nezakhiwo ezinhle kakhulu zezimpawu.
Ngokuya ocwaningweni, iNorth America kulindeleke ukuthi ihlale iyimakethe yes sandwich enkulu yezindiza ephakathi nendawo ngesikhathi sokubikezela. Iningi labakhiqizi bezindiza banezitshalo zokukhiqiza nezomhlangano eziseNyakatho Melika. Ngaphezu kwalokho, bonke abakhiqizi abakhulu besam sandwich babakhona esifundeni ukuxhasa ama-OEM ekwakhiweni kwezidingo zemikhiqizo ethuthukile yezidingo zezindiza. Kodwa-ke, i-Asia-Pacific kulindeleke ukuthi ibone ukukhula okuphezulu kakhulu ngesikhathi sokubikezela. Usayizi omkhulu wezithuthi ezindiza; ukuguquka kancane kancane kwezitshalo zokukhiqiza / zomhlangano wama-OEM; nezindiza ezindizayo zezentengiso zomdabu nezesifunda, njengeComac C919, i-ARJ21, ne-MRJ, ezongezwe ukwanda kokuhamba kwabagibeli kuzoqhubeka nokushayela imakethe yase-Asia-Pacific eminyakeni ezayo.
Okwedlule: Cishe izinsuku ezingama-30 amashadi we-aluminium